QM oo Imaaraadka Carabta sheegtay inay Qal-qal gelinayso Siyaasadda Soomaaliya - Latest News Updates
Qoraal aad u dheer oo ay soo saareen guddiga dabagalka cunaqabataynta hubka ee Soomaaliya saaran ayaa lagu cadeeyay arrinta ku saabsan lug lahaansha ay siyaasadda Soomaaliya ku leeyihiin dawladaha qaar ee caalamka.
Warbixintaan waxaa lagu sheegay in dawlada Imaaraatka ay si weyn u gil gilshay siyaasadda Soomaaliya sanadkaan kadib markii lacag ay guddigu ku sheegeen mid laaluush ah siiyeen maamul goboleedyada dalka ka jira ee qeybta ka ah dawlada Federalka ah Soomaaliya si ay uga dhaadhiciyaan inay ka hor yimaadeen go’aankii ay dawlada Soomaaliya ka qaadatay khilaafka ka dhex jira dawladaha Khaliijka gaar ahaan Qatar iyo xulufadda Sacuudiga iyo Imaaraadku hormuudka u yihiin.
Guddigaan Q,M ka tirsan waxay warbixintooda ku sheegeen in dawlada Imaaraadka ay madaxda maamul goboleedyada ay kulan u qabatay kadibna ay lacag ku siisay sidii wakiiladooda baarlamaanka Soomaaliya ku jira u carqaladayn lahaayeen go’aanka dhex dhexaadnimada ah ee dawlada Soomaaliya ka qaadatay arrinta khilaafka Khaliijka.
“Madaxda Imaaraadku dadaal badan ayay galinayaan sidii ay dawlada Soomaaliya cadaadis loogu saari lahaa inay xiriirka u jarto Qatar oo iyaga la safato waxaana arrintaas Imaaraatku u marayaan maamul goboleedyada dalka ka jira” ayaa warbixintaan lagu yiri.
In xarumaha ganacsi tan ugu yar laga qaado lacag dhan 10 Dollar tan ugu badana laga qaado 70 kun oo Dollar ayaa warbixintaan lagu sheegay.
Dhanka kale arrinta Daacish mar ay ka hadlaysayn wxay guddigu sheegeen inuu jiro koror ay sameynayaan kooxda Daacish tusaale ahaan sanadkii hore waxay aad uga kordheen tiradda hadda ku jirta Maleeshiyaadka Daacish ee Soomaaliya jooga.